Hu Sɛnea Wo ne Wo Ba Bɛkasa​​—Munnnye Akyinnye | Nea Ɛma Abusua Nya Anigye
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Me babea no dii mfe 14 no, na wayɛ nyiyiano. Sɛ bere so sɛ yɛrebedidi na mefrɛ no a, otumi ka kyerɛ me sɛ bere a ɔpɛ na obedidi. Mibisa no sɛ wawie n’adwuma a, otumi ka kyerɛ me sɛ mma mennhaw no. Nea ɛtaa ba ne sɛ obiara teɛteɛm gu ne yɔnko so.”—MAKI, JAPAN. *
Sɛ wo ba rekɔ mpanyin mu a, ɛrenyɛ mmerɛw mma wo, efisɛ akyinnye de, ɔne wo begye bi paa, enti wubehia abotare pii. Maria yɛ ɔbaatan a ɔwɔ Brazil; ne babea adi mfe 14. N’asɛm ne sɛ: “Sɛ mekasa na me ba no ka bi a, na me bo retew. Obiara nte ne yɔnko ase, enti obiara teɛteɛm gu ne yɔnko so.” Carmela wɔ Italy, na ɔno nso wɔ saa haw no mu. Ɔkae sɛ: “Me babarima tumi ne me gye akyinnye denneennen ma ɔde abufuw kɔhyɛ ne dan mu to ne ho pon mu.”
Sɛ mmofra rekɔ mpanyin mu a, adɛn nti na wɔn mu binom yɛ nyiyiano saa? Efi wɔn ayɔnkofo anaa? Ebetumi aba saa. Bible kyerɛ sɛ obi ayɔnkofo betumi ama wayɛ papa anaa bɔne. (Mmebusɛm 13:20; 1 Korintofo 15:33) Afei nso nneɛma a mmofra de gyigye wɔn ani nnɛ no, dodow no ara kyerɛ wɔn atuatew.
Nanso nneɛma bi nso wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yehu. Saa nneɛma no, sɛ wote ase na wuhu sɛnea ɛka wo ba no a, ɛnyɛ den pii sɛ wode bɛyɛ adwuma. Ma yɛnhwɛ emu bi.
ABOFRA NO “ADWENE” GU SO RENYIN
Ɔsomafo Paulo kyerɛw sɛ: “Meyɛ akokoaa no, mekasae sɛ akokoaa, midwen sɛ akokoaa, misusuw nsɛm ho sɛ akokoaa; na afei a mayɛ ɔpanyin yi, mayi nkokoaa su no afi hɔ.” (1 Korintofo 13:11) Paulo asɛm yi ma yehu sɛ ɛsono sɛnea mpanyimfo dwen, ɛnna ɛsono sɛnea mmofra dwen. Ɛne sɛn?
Abofra de, sɛ ɔte biribi a, ɔfa no sɛnea ɔtee no no ara. Nanso, obi a wanyin de, sɛ ɔte biribi a, otumi te ase dwen ho kɔ akyiri ansa na wasi ho gyinae. Yɛnyɛ nhwɛso bi. Mpanyimfo tumi dwen biribi ho hu sɛ, sɛ dekode no nto mmara mpo a, ebia na ɛnyɛ fɛ sɛ ɔbɛyɛ; afei nso obedwen ho sɛ, nsunsuanso bɛn koraa na ɛde bɛba afoforo so? Mpanyimfo ayɛ saa ama aka wɔn hɔ, na mmofra a wɔrekɔ mpanyin mu de, afei na wɔresua.
Bible kasa kyerɛ mmofra sɛ wonsua sɛ wɔde wɔn “adwene” bɛyɛ adwuma. (Mmebusɛm 1:4) Ɛnyɛ mmofra nko; Kristofo nyinaa, Bible tu wɔn fo sɛ wɔmfa wɔn “adwene” nyɛ adwuma. (Romafo 12:1, 2; Hebrifo 5:14) Ɛtɔ da a, wo ba no adwene a ɔpɛ sɛ ɔde yɛ adwuma nti, ɛbɛma ɔne wo agye akyinnye wɔ nneɛma nketenkete mpo ho. Ɛtɔ da bi nso a, wubehu sɛ nea ɔreka no mfa kwan mu koraa. (Mmebusɛm 14:12) Ɛba saa a, wobɛyɛ dɛn ne no asusuw asɛm no ho a ɛnyɛ akyinnye?
SƆ EYI HWƐ: Sɛ wo ba ne wo gye akyinnye a, ma ɛntena w’adwenem sɛ ebia wahu sɛ seesei otumi de n’adwene yɛ adwuma nti na ɔreyɛ saa, na ebetumi aba sɛ nea ɔreka no mpo, n’ani mmeree ho pii. Sɛ wopɛ sɛ wuhu ne tirim asɛm paa a, di kan kamfo no sɛ watumi de n’adwene ayɛ adwuma. (“Sɛ ɛnyɛ biribiara ho na me ne wo yɛ adwene mpo a, m’ani agye sɛ wutumi dwen nneɛma ho saa.”) Afei boa no ma onnwen nea ɔkae no ho bio. (“Nea woreka yi, wohwɛ a baabiara na ɛbɛyɛ adwuma?”) Ɛbɛyɛ wo nwonwa sɛ ɔbɛsan adwen nea ɔkae no ho na wasesa n’adwene.
Nanso ehia sɛ wohwɛ yiye. Sɛ wo ne wo ba reka asɛm a, ɛnyɛ w’adwene sɛ wobɛyɛ araa ma wahu sɛ nea ɔreka no nye. Sɛ woka biribi na wamfa mpo a, ebia ɔde nea wokae no bɛkɔ adwennwene mu nanso ɔremma wunhu. Anhwɛ mpo a akyiri yi ɔde nea wokae no bɛyɛ adwuma na waka sɛ ɔno ara na ɔde saa adwene no bae.
“Biribi ketewaa bi mpo a, na adan akyinnye wɔ me ne me babarima ntam. Okyi sɛ mɛka sɛ ɔnhwɛ nneɛma so yiye anaasɛ mma ɔnnsereserew ne nuabea. Saa bere no, ɛyɛ me sɛ nea na ɔpɛ ara ne sɛ anka mebisa no nea ɛwɔ ne tirim na mate no ase aka biribi te sɛ, ‘Saa na asɛm no te, woahu?’ anaa ‘Mahu nea worepɛ akyerɛ.’ Seesei midwen ho a, mihu sɛ, sɛ mekaa biribi saa a, anka ebia akyinnye no anyɛ bebree saa.”—Kenji, Japan.
ABOFRA NO RESUA SƐ OBESI PI
Awofo pa ma ɛyɛ mmerɛw ma wɔn mma sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn adwene
Abatete mu ade biako a ɛho hia paa ne sɛ wubetumi atete wo ba ama wayɛ panyin pa na waso n’adwe bɔ. (Genesis 2:24) Ade biako a ɛbɛboa ama abofra no atumi ayɛ panyin pa ne sɛ ɔno ankasa behu baabi a n’ani kyerɛ wɔ abrabɔ mu. Suban bɛn na okura? Dɛn na ogye di? Dɛn na ehia no paa wɔ asetena mu? Abofra a onim baabi a n’ani kyerɛ wɔ abrabɔ mu no, sɛ obi pɛ sɛ ɔtwetwe no kɔ bɔne mu a, ɛnyɛ bɔne no ho nsunsuanso nko na obedwen ho. Obebisa ne ho sɛ: ‘Nkurɔfo hu me sɛn? Dɛn na ehia me paa wɔ asetena mu? Obi a ɔte sɛ me kɔyɛ saa ade yi a, nnipa bebu no sɛn?’—2 Petro 3:11.
Bible ka Yosef ho asɛm kyerɛ yɛn sɛ ɔyɛ aberantewa a na onim nea ɔreyɛ. Kae bere a Potifar yere kae sɛ ɔne no mmɛda no. Yosef kae sɛ: “Ɛbɛyɛ dɛn na matumi adi amumɔyɛsɛm a ɛte sɛɛ na mayɛ bɔne atia Onyankopɔn?” (Genesis 39:9) Saa bere no, na Onyankopɔn nhyɛɛ awaresɛe ho mmara biara mmaa Israelfo no, nanso Yosef tumi de n’adwene huu sɛnea Onyankopɔn bɛfa asɛm no. Sɛnea Yosef kae sɛ “Ɛbɛyɛ dɛn na matumi” no kyerɛ sɛ sɛnea Onyankopɔn hu nneɛma no, saa na na ɔno nso hu nneɛma, na ɛma yehu sɛ na Yosef te nea ɔreyɛ no ase.—Efesofo 5:1.
Wo ba no nso gu so de n’ani rekyerɛ baabi wɔ asetena mu. Eye sɛ ɔreyɛ saa efisɛ, sɛ otumi si pi a, n’atipɛnfo ntumi nhyɛ no mma ɔnyɛ nea ɔmpɛ, na wɔrentumi mmu mfa ne so. (Mmebusɛm 1:10-15) Esiane sɛ ɔpɛ sɛ osi pi wɔ abrabɔ mu nti, ɛtɔ da a wo nso ɔne wo de besi ani. Ɛba saa a, dɛn na wubetumi ayɛ?
SƆ EYI HWƐ: Ɛho nhia sɛ wo ne wo ba no begye akyinnye dennen biara; nea ɛsɛ sɛ woyɛ ara ne sɛ wubetĩ asɛm a ɔkae no mu. (“Ma menhwɛ sɛ nea wokae no mete ase a. Wuse . . . ”) Afei bisabisa no nsɛm bi. (“Dɛn na ɛma wote nka saa?” anaa “Dɛn nti na wunyaa saa adwene no?”) Fa kwan bi so hu nea ɛwɔ wo ba no tirim. Ma ɔnkyerɛ nea ɛma n’adwene si pi no. Sɛ nea ɔreka no nyɛ bɔne na mmom sono na ɛsono nea obiara pɛ a, ɛnde ma wo ba no nhu sɛ wo ne no nyɛ adwene nwie nanso wote no ase.
Baabi a obi de n’ani bɛkyerɛ wɔ abrabɔ mu ne si a obesi pi n’adwene mu no de, ɛho hia paa, na mfaso wɔ so. Bible ankasa ka kyerɛ Kristofo sɛ ɛnsɛ sɛ wɔyɛ sɛ nkokoaa a “asorɔkye de wɔn di akɔneaba denam nnipa nnaadaa so, denam nnɛɛdɛe ne bradato so.” (Efesofo 4:14) Enti wo ba a ɔrekɔ mpanyin mu no, ma no kwan na hyɛ no nkuran ma onnya ne nipasu na onsi pi wɔ n’adwene mu.
“Sɛ mema me mmabea hu sɛ wɔkasa a mitie a, wɔn nso, sɛ wɔne m’adwene nhyia mpo a, ɛma wɔyɛ aso tie me. Mehwɛ yiye sɛ meremfa m’adwene nhyɛ wɔn so. Mema wɔn kwan ma wɔde wɔn adwene yɛ adwuma na wɔatumi asi pi.”—Ivana, Czech Republic.
FA WO NAN SI FAM NANSO NYƐ KATEE
Mmofra a wɔrekɔ wɔn mpanyin mu no, ebinom yɛ wɔn ho sɛ mmofra nkumaa paa; wotumi kɔfa asɛm a atwam san bɛka de teetee awofo. Sɛ wo mma taa yɛ saa a, ɛnde hwɛ yiye. Sɛ wotaa gyaagyaa nsɛm mu ma wɔn a, ɛbɛma woanya asomdwoe kakra, nanso anhwɛ a ebewie ase no, na wode ahyɛ wɔn adwene mu sɛ, sɛ wɔne wo gye akyinnye a, wɔn nsa bɛka nea wɔrehwehwɛ. Dɛn na ebetumi aboa wo? Fa Yesu afotu yi yɛ adwuma. Ɔkae sɛ: “Ɛno ara ne sɛ momma mo Yiw nyɛ yiw, na mo Dabi nyɛ dabi.” (Mateo 5:37) Sɛ wo ba hu sɛ wonsesa w’ano a, ɔne wo ntaa nnye akyinnye.
Ɛno nso nkyerɛ sɛ yɛ katee. Ma wo ba no kwan na ɔnkyerɛ n’adwene. Yɛmfa no sɛ woakyerɛ no bere a ɛsɛ sɛ ɔba fie nanso da koro bi de, ose ɔrentumi mma fie ntɛm. Sɛ wutie no a, ɛnkyerɛ sɛ wafa wo so, na mmom Bible afotu yi na wode reyɛ adwuma: “Momma nnipa nyinaa nhu mo ntease.”—Filipifo 4:5.
SƆ EYI HWƐ: Bere a ɛsɛ sɛ mmofra ba fie ne fie hɔ mmara foforo a aka no, abusua no nyinaa nhyia nka ho asɛm. Tie obiara asɛm na susuw nneɛma ho yiye ansa na woasi gyinae. Roberto yɛ agya a ɔwɔ Brazil, na ɔkyerɛ sɛ: “Ɛsɛ sɛ awofo ma wɔn mma no hu sɛ, sɛ mmofra no bisa biribi na ɛnto Bible mmara biara a, wobetumi ate ase ama wɔn.”
Yenim sɛ ɔwofo biara nni hɔ a mfomso nni ne ho. Bible ka sɛ: “Yɛn nyinaa di mfomso mpɛn pii.” (Yakobo 3:2) Sɛ wuhu sɛ woka ho bi na akyinnye bi bae a, ɛmma ɛnnyɛ wo den sɛ wobɛpa wo ba no kyɛw. Sɛ wugye wo mfomso tom a, ɛkyerɛ sɛ wowɔ ahobrɛase, na wo ba no nso besuasua wo.
“Bere bi, me ne me babarima gyee akyinnye, na me bo dwoe no, mepaa no kyɛw sɛ mekasaa abufuw so saa. Ɛno maa ɔno nso ne bo dwoe, na efi hɔ no, afei de mekasa a, na otie.”—Kenji, Japan.
Dɛn na meyɛ a etumi kɔfa akyinnye ba me ne me ba ntam?
Mepɛ sɛ mete me ba ase yiye a, asɛm a ɛwɔ “Ɔwɛn-Aban” yi mu no bɛboa me sɛn?
Mɛyɛ dɛn ne me ba akasa a yɛrennye akyinnye?